The Irrawaddy's Blog: မကြာမီ ပြဌာန်းမည့် အွန်လိုင်း ဥပဒေသစ်ကြောင့် Wikipedia နှင့် Wordpress က ၂၄ နာရီကြာ ဆိုဒ်ကိုပိတ်၊ ကမ္ဘာ့နာမည်ကျော် ဆိုဒ်များလဲ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
အမေရိကန်စံတော်ချိန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ညသန်းခေါင်မှစပြီး ၂၄ နာရီကြာ ဆိုဒ်ကိုရပ်ထားပြီး လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းမည့် Stop Online Piracy Act (SOPA) နှင့် Protect IP Act (PIPA) ဥပဒေ နှစ်ခု ကို သပိတ်မှောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် online research လုပ်ချင်တဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူများကို ညသန်းခေါင်မတိုင်မှီ ဝီကီပီးဒီးယားကို ဝင်ပြီး မိမိတို့လိုချင်တာများကို ကြိုတင်ရှာဖွေထားရန် Wikipedia founder Jimmy Wales က ပြောထားပါတယ်။
Opposition to the Protect IP Act (PIPA) and the Stop Online Piracy Act (SOPA) grows with each day. This brief list is justasampling of businesses. Visit the Center for Democracy and Technology’s list foramore complete look at the individuals, organizations, experts and legislators that know how bad this legislation could be.
Posted in: IT , iT Thar Gyi , အိုင်တီ